Ayan Aden, 20-jir ah, waa Gabyaa ku nool magaalada Birmingham ee Dalka Ingiriiska. Waa Gabar la shaqeysa una ololeysa bulshada rayidka.
Ayan waxaa laga casumaa oo ay ka hadashaa munaasabadaha ay bulshada qabsadaan, waxay sidoo kale ka hadashay madasha caanka ah ee TEDx. Waxay hormuud ka tahay barnaamijka Guriyeenta ee “West Midlands Combined Youth Authority”, iyadoo xooga saarta horumarinta iyo hoggaanka loo dhan yahay.
“Gabayga waxuu ii so celiyay Soomaalinimadayda,” ayey tiri Ayan. “Soomaalinimadu qalbigeyga ayey ku taallaa maadaama aan ku soo barbaaray qurbaha oo ay dantu igu qasabtay inaan laba dhalasho yeesho.”
“Maansada aan tiriyo waxay ka tarjumeysaa labadaas dhalasho, waana sababta aan ugu qoro Afka Ingiriiska iyo Afka Soomaaliga, si aan fariintayda u gaarsiiyo dadka. Taasi waxay ii sahashay inaan dadka kale la xiriiro, angioo ka hadlaya arrimo muhiim ah oo bulshada qurbaha ku saabsan.”
Gabaygan hoose oo isugu jira labada luqad ee Soomaaliga iyo Ingriiska ayey ka aqrisay xafladii Somali Week Festival ee sanadkii 2019-ka.
Gabayada Abwaanka oo idil Ayan Aden
Ayan Aden war dheeri ah